सुकेटार विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सका चार उडान कटौती- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक ८, २०७८ आनन्द गौतम
ताप्लेजुङ — नेपाल एयरलाइन्सले काठमाडौं–ताप्लेजुङ उडानमा कटौती गरेको छ । सातामा चार दिन नियमित र यात्रु भए एक दिन चार्टर गरी पाँच उडान हुँदै आएको सुकेटार विमानस्थलमा नयाँ मन्त्री प्रेम आले आएसँगै उडान कटौती गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सातामा एक दिन बुधबार मात्रै उडान राखिएको छ ।
‘यसअघि सोमबार, बुधबार, शुक्रबार र शनिबार गरी चार उडान थियो,’ निगमका ताप्लेजुङ इन्चार्ज लोकेन्द्र लिम्बूले भने, ‘अब बुधबार एक दिन मात्रै हुन्छ ।’ केन्द्रबाट निर्देशन आएकाले त्यसरी नै टिकट काट्न थालिएको उनले बताए ।
यसअघिको तथ्यांकअनुसार पूर्वमा ताप्लेजुङ र भोजपुर तथा पश्चिममा दाङको उडानमा अधिक यात्रु हुने गरेका थिए । ताप्लेजुङबाट ९५ प्रतिशत यात्रु भरिने गरेको लिम्बूले बताए । ‘म ताप्लेजुङ आएको एक वर्ष भयो,’ उनले भने, ‘हरेक उडान यात्रुले भरिएकै छ ।’
यहाँबाट काठमाडौंसम्मको भाडा प्रतिव्यक्ति ७ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ छ । ताप्लेजुङवाट गाडीमा झापाको बिर्तामोड पुग्न कम्तीमा आठ घण्टा र काठमाडौं पुग्न दुई दिन लाग्ने भएकाले उडान कटौती नहुँदा अशक्त र बिरामीलाई सहज भएको थियो । सुकेटार विमानस्थलबाट जहाजमा एक घण्टामै काठमाडौं पुगिन्छ । उडान कटौतीले यात्रुलाई समस्या हुने व्यवसायी सुरेश सिंघक बताउँछन् । प्रदेश राजधानी विराटनगर–ताप्लेजुङ उडानको समेत माग भइरहेका बेला भएकै उडान कटौती गर्न नहुने स्थानीयको भनाइ छ ।
नेपाल एयरलाइन्सबाहेक ताप्लेजुङमा सीता एयरले पनि बेलाबेला उडान गर्ने गरेको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ १०:२५
गरिबी र अभावका माझ भ्रममा परी छोरीलाई धर्मपुत्री बनाएर पठाएका अभिभावकमध्ये केहीले वर्षौंको अत्यास र प्रयासपछि भर्चुअल कुराकानी गर्न पाएका छन् । केहीले छोरीसँग प्रत्यक्ष भेट गरे पनि न्यास्रो मेट्न सकेका छैनन् ।
कार्तिक ८, २०७८ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — चन्द्रागिरि नगरपालिकाकी ५८ वर्षीया सावित्री केसी ७ वर्षको छँदै परिवारसँग छुट्टिएकी कान्छी छोरी सविनाको विश्वासिलो खै–खबर थाहा पाउन १४ वर्षदेखि अधैर्य थिइन् । गत असार अन्तिम साता भने अचम्मै भयो । उनले छोरीलाई मोबाइलको स्क्रिनमा देखिन् ।
छोरीले गरेको भिडियो कलमा उनले सन्चो–बिसन्चो सोधिन् । तर छोरीले आमाको भाषा बुझिनन् । छोरीको मुखबाट पनि केही शब्द निस्किए । सावित्रीले पनि छोरीको भाषा बुझिनन् । अनुहारको भाव हेरेर दुवैले न्यास्रो साटे ।
२०६४ तिरको कुरा हो । सावित्रीका दुई छोरीमध्ये कान्छी सविना नजिकैको सरकारी स्कुलमा ३ कक्षामा पढ्थिन् । घरघरै डुलाएर धुप बेच्दै आउने एक महिलाले उनकी ठूलीआमाकी छोरी शान्तिलाई भनिन्, ‘यताउति कोही दुःखीगरिबका बालबच्चा छैनन् ? तिनलाई पढाइदिने एउटा संस्था मसँग सम्पर्कमा छ ।’ थानकोट घर भएकी शान्तिमार्फत धुप बेच्न आउने ती महिलाले सविनाको परिवारको दुःख थाहा पाइन् । सविनाका बाबु सहरमा टेम्पो चलाएर परिवारको गर्जो धानिरहेका थिए ।
केही दिनमै संस्थाको मान्छे बताउँदै पार्वती खत्री र लोकेन्द्र खत्री घरैमा आइपुगे । सविनालाई संस्थामा राखेर निःशुल्क पढाइदिने आश्वासन दिए । सावित्री दम्पती सहमत भए । त्यसपछि चाइल्ड ब्राइट नेपाल नामक संस्थाले सविनालाई लग्यो । ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित संस्थाको बाल आश्रममा पुगेर सावित्री र उनका श्रीमान् बाबुकाजीले बेलाबखत छोरीलाई भेट्थे । नियास्रो मेट्थे ।
सावित्रीका अनुसार एक दिन संस्थाका मान्छेहरूले उनीहरूलाई केही कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाए । अनपढ सावित्री दम्पतीले भनेअनुसार गरिदिए । त्यसको केही दिनमै उनीहरूले थाहा पाए, सविनालाई धर्मपुत्री बनाएर संस्थाले विदेश पठाइदिएछ ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा सविनालाई अन्तरदेशीय धर्मसन्तान ओसारपसारमा सघाउने युरोपको चिल्ड्रेन विदाउट फ्रन्टिअर्स संस्थाले चाइल्ड ब्राइट नेपालमार्फत २०६४ फागुन ८ मा स्पेन उडाएको देखिन्छ । छोरीलाई झुक्याएर विदेश पठाइएको कुरो सावित्रीले माइतमा सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले संस्थाका मान्छे पनि खोज्दै गयौं । प्रहरीलाई पनि भन्यौं तर केही भएन ।’ छोरीको खोजी जारी राखेपछि संस्थाका मान्छे बताउने लोकेन्द्रले उनीहरूलाई बेलाबेखत कहिले कहाँ त कहिले कहाँ बोलाउँथे । छोरीका केही थान तस्बिर थमाएर पठाइदिन्थे । पछि–पछि उनी सम्पर्कमै आउन छाडे । सावित्रीलाई छोरीको यादले सताउँथ्यो । उनले भनिन्, ‘खालि रुन मन लाग्थ्यो । सपनामा पनि छोरीलाई नै देखिरहन्थे, खालि म घर आउन पाइनँ भन्थी ।’
चन्द्रागिरिकै वनदेवी मन्दिरनजिकै जस्तापाताले बारेको सानो घरमा बस्छन्, रामबहादुर मगर र शान्ति मगर दम्पती । ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका उनीहरूका तीन छोरी थिए । माइली छोरी बबिता भने साथमा नभएको १४ वर्ष बितिसक्यो । उनीहरूको कथा पनि सावित्रीकै जस्तो छ ।
शान्ति मगर र रामबहादुर मगर
सविनासँगै पढ्ने बबितालाई पनि त्यही संस्थाले २०६४ मा धर्मपुत्री बनाएर स्पेन उडाइदियो । रामबहादुर र शान्तिले छोरीलाई धर्मपुत्री बनाएर पठाइएको त थाहा पाए तर त्यसपछि छोरीको खै–खबर कहींकतैबाट पाएनन् । दिनभर मजदुरी नगरे पेट पाल्न गाह्रो हुने परिस्थितिबाट फुर्सद निकालेर छोरी खोज्ने समय उनीहरूसँग थिएन । संस्थाका मान्छे बताउनेले रामबहादुरलाई केही पटक दुई–चार हजार रुपैयाँ थमाइदिए । छोरीको फोटोसमेत देख्न पाएनन् । रामबहादुर दम्पतीलाई आफ्नी छोरी कुन संस्थाले लगेको हो, कुन देश पुर्‍याएको हो भन्नेसम्म थाहा थिएन । निरक्षर रामबहादुरले निर्दोष शैलीमा सुनाए, ‘अमेरिकाको स्पेन भन्ने ठाममा लगेको छ रे !’
पछिल्लो समय सावित्रीको मन धेरै छटपटाएको थियो । उनी थानकोट चोकतिर निस्किन्थिन् । चिनेजानेकासँग मनको बह पोख्थिन् । लोकेन्द्रलाई फोन गर्थिन् । तर लोकेन्द्र हतपती फोन उठाउँदैनथे । उठाइहाले पनि धेरै कुरा गर्दैनथे । उनले भनिन्, ‘मेरो नम्बरबाट फोनै नउठाउने गरेपछि मैले अरूको मोबाइलमा ब्यालेन्स हालेर कल गरें तर पार लागेन ।’
थानकोट चोकभित्र औषधि पसल गरिबस्ने सावित्री अधिकारीले एक दिन सावित्री केसीको कथा सुनिन् । उनले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्सम्म पुर्‍याउने सम्पर्क बताइदिइन् । परिषद्ले धर्मसन्तान बनाएर पठाएका कागजात र संस्थाका मान्छेबारे खोजीनिती गरेपछि गत असार अन्तिम साता सावित्रीको छोरीसँग सम्पर्क भयो । त्यही मेसोमा रामबहादुर र शान्तिले पनि आफ्नी छोरीलाई मोबाइल स्क्रिनमा देख्न पाए । ‘ठूली छोरीको मोबाइलमा कुरा गरेम् । ठूली, राम्री र गोरी भै’छे,’ सावित्रीले सुनाइन् ।
वर्षौंपछि छोरीलाई मोबाइलको स्क्रिनमा देखेर आमाको धीत कसरी मर्थ्यो र ! त्यही माथि कुराकानी गर्न भाषा पनि तगारो भइदियो । बेलाबेला भिडियो कल हुँदा सावित्रीकी जेठी छोरी बहिनीसँग आमालाई कुरा गराउन दोभाषे भइदिन्छिन् । सावित्रीले भनिन्, ‘अब दिदी–बहिनी कुरा गर्छन् । हामी त जान्दैनम् । इंग्लिस आउँदैन । उही हेर्ने मात्रै त हो ।’
रामबहादुर दम्पतीले पनि १४ वर्षपछि छोरीलाई मोबाइलको स्क्रिनमा देख्दा दोहोरो कुराकानी भएन । रामबहादुरले भने, ‘अब ऊ इंग्लिस बोल्छ, हामी बुझ्दैनम् ।’ हुर्किसकेकी छोरीको अनुहार मात्रै देखे पनि उनीहरूलाई सन्तोक मिलेको छ । रामबहादुरले सुनाए, ‘पहिले त अलि काली–काली थियो । अहिले गोरो भएछ । मान्छे पनि बढेर अग्लो छ । बाउआमाले नै चिन्न नसक्ने भइसकेछ ।’
काठमाडौंको काँठ क्षेत्र मानिने चन्द्रागिरिमा सावित्री र रामबहादुरजस्ता अभिभावक थुप्रै छन्, जसले गरिबी र अभावका बेला भ्रममा परी आफ्ना सन्तानलाई धर्मपुत्री बनाएर पठाएका छन् । यस्ता अभिभावकमध्ये केहीले वर्षौं लामो अत्यास र छटपटीपूर्ण प्रतीक्षापछि मात्रै आफ्ना छोरीसँग भर्चुअल कुराकानी गर्न सकेका छन् । केहीसँग भने छोरीसँग प्रत्यक्ष भेट गरेको तर छोरीको अत्यार अधुरै रहेको अनुभव छ ।
मैया आलेमगरका श्रीमान् २०५० सालमै बिते । पतिलाई रोगले गाल्दै गरेका बेला उनी गर्भवती थिइन् । साथमा आठ वर्षको छोरा र एक छोरी लक्ष्मी हुर्काउने दायित्व पनि जेनतेन निर्वाह गरिरहेकी थिइन् । रोगसँग जुधिरहेका श्रीमान्ले एक दिन सातदोबाटोतिरकी एक महिलामार्फत लक्ष्मीलाई धर्मसन्तान बनाएर विदेश पठाउने प्रक्रिया सुरु गरे । उनलाई यस्तो प्रक्रियाबारे उतिधेरै मेसो थिएन । प्रक्रिया पूरा गर्न गाविस र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर कागजात बनाउने बेला सरकारी कर्मचारीले भनेको कुरा उनी अझै सम्झिन्छिन् । उनले सुनाइन्, ‘दुइटा बच्चा भएर पनि किन छोरी पठाउन लाग्या भनेर सीडीओले गाली गरे । तर श्रीमान्ले मेरो ज्यान ठीक छैन, त्यही भएर पठाउन लाग्या भन्नुभो ।’ श्रीमान्को निर्णयमा उनको सहमति नभए पनि असहमति जनाउन सकिनन् ।
मैया आलेमगर (साथमा उनकी छोरी अस्मिता)
मैयाका अनुसार छोरीलाई धर्मपुत्री बनाएर पठाएको दुई महिनापछि उनका श्रीमान् बितिहाले । त्यसपछि उनलाई छोरीको न्यास्रोले झन् सताउन थाल्यो । उनले भनिन्, ‘कोहीले बेचेर खाको पनि भने । के–के भने भने !’ त्यस्ता कुरा सुनेर उनको मन कुँढिन्थ्यो । कुँढिएको मन उनले आफैं सम्हालिन् । धर्मपुत्री बनाएर उनकी छोरीलाई बेल्जियम लैजाने विदेशी दम्पतीका एक छोरा मात्रै थिए । छोरीको खाँचो परेकाले उनीहरूले लक्ष्मीलाई धर्मपुत्री बनाएको कुरा मैयालाई थाहा थियो । छोरी बेल्जियम गएको तीन वर्षपछि विदेशी दम्पती लक्ष्मीलाई लिएर नेपाल आए । घरमै आएर भेटे अनि केही दिन घुमेर उतै फर्के । यस्तो क्रम दुई तीन पटक चल्यो । लक्ष्मीले भनिन्, ‘पछिल्लो पटक भने छोरी एकैचोटि भूकम्प गएपछि आइन् ।’
वि.सं. २०७२ पछि भने लक्ष्मी नेपाल आएकी छैनन् । मैया बेलाबखत छोरीलाई मोबाइलको स्क्रिनमा देख्छिन् । उनले भनिन्, ‘उसको फुर्सद कहिले मिल्छ था हुन्न । फुर्सद भएका बेला पनि के कुरा गर्नु ? हेराहेर मात्र हुन्छ । इंग्लिस पनि आउँदैन ।’
दिदीलाई धर्मपुत्री बनाउने दम्पतीले गरेको आर्थिक सहयोगकै कारण उनकी बैनी अस्मिताले ४ कक्षापछि १० कक्षासम्म बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न पाइन् । अस्मिताका अनुसार दिदीले म्यासेज पठाइराखे पनि कुरा गर्ने समय उति जुर्दैन । साइनो पनि फरक भाषा र परिवेशमा हुर्किएकाले औपचारिक जस्तो मात्रै छ । अस्मिताले भनिन्, ‘हल्का–फुल्का कहिलेकाहीँ हो । सन्चो–बिसन्चो सोध्नुहुन्छ । त्यही हो ।’
मैया केसीको पनि उस्तै कथा छ । उनको घर थानकोट चोकैमा पर्छ । त्यही घरको भुइँतलामा चिया पसल चलाएर उनले परिवारलाई आर्थिक भरथेग गरेकी छन् । २०५० सालतिरको कुरा हो । मैया दम्पती एक छोरा र वर्ष दिन पनि नपुगेकी छोरी हुर्काइरहेका थिए । उनको गर्भमा तेस्रो सन्तान थियो ।
दुःखजिलो गरेर परिवार चलाइरहेका तिनै दिनमा उनको परिवारको सम्पर्कमा एक युवक आए । ती युवक उनको गाउँले दिदीकी छोरीको कीर्तिपुरस्थित घरमा डेरा गरी बस्थे । अहिले त मैयाले नाम पनि बिर्सिसकिन् । तिनै युवकले भनेकै भरमा र आफन्तीले सही थापेका भरमा उनीहरूले छोरीलाई धर्मपुत्री बनाएर पठाउने निर्णय लिए । मैयाले भनिन्, ‘पेटमा हुर्किरहेको सन्तानसहित बच्चाबच्ची कसरी हुर्काउछेस् भनेर सबैले भने । उता पठाए राम्रो हुन्छ भनेर श्रीमान्ले पनि भनेपछि म केही बोल्न सकिनँ ।’
सहमति जनाएको केही दिनमै ती युवक फ्रेन्च दम्पती लिएर घरमा आए । उनीहरूले कागजात बनाएर मेनुकालाई लिएर फ्रान्स उडे । मैयाले भनिन्, ‘ती डाक्टर दम्पतीको एउटा छोरा रै’छ । छोरीको खाँचो परेकाले हाम्री छोरी लगेका रै’छन् ।’
छोरी लगेपछि कैयन् दिन मैयाको मनको आकाशमा निराशाको डम्म बादल लागिरह्यो । उनलाई मोटो र लायककी छोरी भित्ता समातेर टुकर–टुकर हिँडिरहेको याद आउँथ्यो । छोरी कस्ती भइन् होला ? कसरी हुर्किरहेकी होला भन्ने खुल्दुलीले सताइरह्यो । उनले भनिन्, ‘कति दिनसम्म त सुत्दै सुतिनँ नि । के गर्नु ! अब कहाँ पुर्‍याए, के गरे होला ? न केही गर्न लगे कि भन्ने पीर भइगो नि ।’
मेनुकापछि मैयाले एक छोरा र एक छोरी जन्माइन् । धेरैपछिसम्म उनलाई छोरीलाई नपठाएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने भइरह्यो । उनले सुनाइन्, ‘कुनै चाडबाड आउँदा पनि त्यही छोरीको याद आउँछ । तीन वटा बच्चा त साथमा छन् । तर त्यही आफूसँग नभएको बच्चाको याद आउँदो रै’छ । त्यसले कति नै खान्थ्यो र भनेजस्तो हुँदो रै’छ ।’
२०७२ को भूकम्पपछि एक दिन उनले पत्यारै नलाग्ने घटना भयो । दुई–तीन जना मान्छेको साथमा लागेर एउटी गोरी केटी घरमा आइपुगिन् । साथमा आएका अन्य नेपाली भने ती गोरी केटी बसेको होटलका मान्छे रहेछन् । कुराकानी भएपछि उनले चाल पाइन्, ती गोरी केटी त आफ्नै पठाइएकी छोरी रहेछिन् । त्यो दिन सम्झिँदै उनले भनिन्, ‘त्यो त सपना जस्तो भयो नि ।’
मैयाले छोरीसँग धीत मरुन्जेल कुरा गर्न र मनको भाव साट्न सकिनन् । उनले सुनाइन्, ‘मेनुका भनें । हँ भनी । त्यति मात्रै हो । पछि–पछि नातिनीहरूले आमा भनेको सुनेर त्यति बोल्न सिकी ।’ उनी मेनुका र परिवारका अरू सदस्य लिएर मनकामना घुम्न गइन् । अरू छोराछोरी मेनुकासँग जेनतेन अंग्रेजीमा बात मार्थे । मैया छोरीको अनुहारमा देखापर्ने भाव अपलक हेरी बस्थिन् ।
केही साता बसेर फर्केकी मेनुका त्यसपछि भने नेपाल आएकी छैनन् । भाइबहिनीसँग भने मेनुकाको इमेल र म्यासेन्जरमा कुराकानी भइराख्छ । आफूले नहुर्काए पनि आफ्नो रगत बोकेकी छोरी हुर्केर ठूली भइसकिन् । कतै छोरीलाई बाटामा देखे पनि झुक्किएर चिन्दिनँ कि भन्ने मैयालाई लागिरहन्छ । उनले भनिन्, ‘आफ्नै छोरी नचिन्ने आमा हुँला भन्ने पीर छ ।’
चन्द्रागिरिका सावित्री केसी जसका छोरी सानो छँदै धर्मपुत्री बनाएर विदेश लगिएका छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ १०:०६